studio 2 phezu kwegadi yasetropiki
UKeith And Kami ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Uxolo kakhulu kuba sigqibe kwelokuba singarenti le ndlu ngexesha lobhubhani we-Covid. Indawo yokungena ikumnyango wethu wangaphambili.
😢Siyaqhubeka nokuqesha igumbi lethu elikumgangatho osezantsi (indlu yesitudiyo ngaselwandle olushushu).
Isitudiyo sethu esikumgangatho ophezulu sifikelelwe kumnyango wangaphambili wasekhaya, sipholile, sikhululekile, sixhotyiswe kakuhle, sinesityalo esithandekayo esizaliswe ibhalkhoni phezu kwetropikhi (URL HIDDEN) i-oasis yokuzola. ❤
Le ndlu ine-balcony, indawo yokuhlala / ikhitshi, igumbi lokulala eliphindwe kabini eline-aircon, igumbi lokuhlambela eline-ensuite kunye nendawo yangasese.
Isitudiyo sethu sifikelelwa ngomnyango wangaphambili wendlu kunye nezinyuko, siziqulethwe, sibucala kwaye sikhuselekile nge-100%.
Isitudiyo silungele abantu ababini kodwa asibafanelanga abantwana njengoko kukho izinyuko kunye nebalcony.
4.83 ·Izimvo eziyi-110
4.83 · Izimvo eziyi-110
Sihamba ngomzuzu omnye okufutshane ukusuka eMon Choisy ulwandle oluhle kakhulu eMauritius kunye nehlathi, i-coral reef kunye ne-3km yeparadesi elunxwemeni.
Le ndawo yendalo kwaye izolile kodwa inobomi bayo, kukho izikhephe zeglasi ezisezantsi eziya kwireef kunye neendawo ezithengisa ukutya elunxwemeni. Iindawo zokumisa iibhasi zihambo olufutshane. ukuhamba, iivenkile ezinkulu kukukhwela ibhasi emfutshane ukuya eGrande Baie, eyona dolophu iphambili yabakhenkethi kwesi siqithi.
I-Scuba diving ilungile kufutshane nathi, uTom waseNorway wenze le filimu yokuntywila eStella Maru, inqanawa yaseJapan eyaphukelwa yinqanawa kufutshane nendlu yethu:
Sihlala sijikeleze ezantsi xa udlula, ke lithuba lakho lokubona ukuba ungasinda na kwimpilo yemihla ngemihla yokuhlala eparadesi kwaye udibanise nabantu balapha.
Ukuba siya kuthenga kwivenkile enkulu yasekhaya singakukhwelisa ;)